FBC - Amajjii 2010 amma Muddee 2011tti lammiilen deeggarsi namoomaa isaan barbaachisu miiliyoona 7.8
Amajjii 2010 amma Muddee 2011tti lammiilen deeggarsi namoomaa isaan barbaachisu miiliyoona 7.8
Finfinnee, Bitootessa 4,2010(FBC)- Sanadni lakkoofsa lammiilee deeggarsa namoomaa waggaa tokkoof barbaadan irratti qophaa’e ifoome.
Deeggarsi namoomaa kun waggaa 1f; Amajjii 2010 amma Muddee 2011tti lammiilee deeggarsa namoomaa barbaadan qabateera.
Sanadicha mootummaa Ityoophiyaa fi dhaabbilee deeggarsaatu waliin ifoomse.
Koomiishinarri Koomiishinii Hoggansa Sodaa Balaa Ityoophiyaa obbo Mitikkuu Kaasan rakkoon hongee akka kanaan duraa waggaa 10 osoo hin taane waggaa waggaadhan mudachuun, diinagdee fi haala jireenyaa lammiilee keenyarratti dhiibbaa uumaa jira jedhan.
Waggaa tokko keessatti lakkoofsi namoota deeggarsa namoomaa barbaadan 7,880,446 ta’uu isaatin, maallaqni Doolaarri biiliyoonni 1.4 ol akka barbaachisu eerameera.
Qorannaa dhiyeenya gaggeeffameen lakkoofsi lammiilee deeggarsa namoomaa barbaadan miiliyoona 7.8 ga’eera. Kunis kan bara darbe yeroo walfakkaatarra daballii %37 agarsiisuu muul’isa.
Hanqinni roobaa, gogiins, sababuma kanaan oomishtummaan naannolee midhaan magarsanitti hir’achuu, geerrin Ameerikaa midhaan margerratti miidhaa qaqqabsiisuu, lolaa naannolee muraasatti mudateen rakkinichi dabaluun akka sababiitti ka’aniiru.
Gama biraatin lakkoofsa deeggaramtootaa bara baajataa 2009 irratti qorannaa Arfaasaa keessa gaggeeffameen Hagayya 2009 kaasee amma Muddee 2010tti lammiileen deeggarsa hataattamaa barbaadan miiliyoona 8.5 turan. Kanaan yoo wal cinaa qabamummoo %8.4 hir’isuu muul’isa.
Kanaafis mootummaan rakkinicha dandamachuuf baajata Birrii miiliyoona 5 ramadee socho’aa turuu koomiishinar Mitikkuu Kaasaa himaniiru.
Deeggarsa namoomaa kana dhiyeessuuf Doolaarri Ameerikaa biiliyoonni 1.44 ni barbaachisa.
Kana keessaa Doolaarri miiliyoonni 7.9 nyaataf, Doolaarri miiliyoonni 6.5 fayyaadhaf, Doolaarri miiliyoonni 3.8 nyaata madaalawaaf, Doolaarri miiliyoonni 2.2 barnootaf, akkasumas Doolaarri miiliyoonni 6.9 bishaan dhugaatii qulqulluu dhiyeessuuf oola.
Lammiilee deeggarsi isaan barbaachisu adda baasuuf torbee 3f qorannaa gaggeeffamerra.
Qorannichi nananolee oomisha midhaanitiin beekamanii fi horsiisee bulaatti gaggeeffame.
Lammiilee deeggarsa namoomaa barbaadan adda baasuuf qorannaa gaggeeffamerratti dhaabbileen federaalaa dhimmichi isaan ilaallatu, biiroleen naannoo, Dhaabbanni Mootummoota Gamtooman, dhaabbilee idil addunyaa fi dhaabbileen miti mootummaa garee 24n hammataman hirmaataniiru.
Faasikaaw Taaddasaatu gabaase.
Oduuwwan Biroo « Eejansichi dhaabbilee dhuunfaa soorama hojjettootaa kutee galii hin goone kaffalchiise	Ragaalee-eyyamaa mirkaneeffannaaf gara abbaa-taayitichaa dhaqan keessaa walakkaa kan ga’an kan sobaa akka ta’an himame »